ဘရာဇီး ငှက်ရိုး: မခင်ချိုဦး ဖခင်နဲ့ညီမ ...
You, Ko Lin Wai Aung, Soe Lynn, Maungmaung Skw and 128 others like this.
Htay Tint တာဝန် တဝက်ကြေသွားပြီ ။
December 29, 2012 at 9:36am · Like · 1
Mawmaw Myothant Forward
December 29, 2012 at 9:37am · Like
Mg Mg very nice
December 29, 2012 at 9:41am · Like
Phyo Mg Mg Win မြင်ရတာစိတ်မကောင်းဘူး အမရယ် ရင်ထဲမှာ
December 29, 2012 at 9:45am via mobile · Like · 1
Nicky Shein ဟိုတလောက သမီးသတင်းကြားပြီး ဆေးရုံတင်လိုက်ရတယ်လို့ ကြားလိုက်တယ်၊ ခုတော့ပြန်ကောင်းလာတာတွေ့ရလို့ ဝမ်းသာတယ်။
December 29, 2012 at 9:34pm · Edited · Like · 4
Aung Naingtun u r my hero!!!!
December 29, 2012 at 10:22am · Like
Myat Soe ခင်ချိုဦးအကြောင်းဖတ်ထားမိတာ၊ စိတ်ထဲဝင်လာလေ စိတ်မကောင်းလေပဲ။
December 29, 2012 at 10:26am · Like · 5
Pauline Kyi Long life lives with the heroic ladies.also nang,and other girls,see,,,! Congratulations sis's and bros please tell them.
December 29, 2012 at 11:17am · Edited · Like
Ko Lay မိသားစုတွေ အရမ်းခံစားနေကြမှာပဲနော်။ စိတ်မကောင်းလိုက်တာ။
December 29, 2012 at 12:00pm · Like
Khin Yu Yu မငယ်အရမ်းတာဝန်ကျေပါတယ်မမရယ်။
December 29, 2012 at 1:39pm · Like
Maung Than Sweတကမ္ဘာလုံးကလူ့နှစ်လုံးသားရှိသူမှန်သမျှ မိသားစုနဲ့ထပ်တူကြေကွဲရပါတယ်၊ တို့အားလုံးကိုယ်စား စာနာနွေးထွေးမှုကိုပြုခဲ့တယ်လို့မှတ်ပါတယ်အောင်ထွေးရေ့။ အေး.. တဆက်ထဲ ပြောလိုက်မယ် ၊ သံသရာကိုခြေကန်ဆန့်ပြီး ဟောဒီမြေကမ္ဘာမှာ ယုတ်မာသူတွေနေစရာနားစရာမရှိအောင် ဆက်လုပ်သွားမယ်ဆိုတာပါပဲ။
December 29, 2012 at 3:25pm · Edited · Like · 7
Nay Yee Yeeမခင်ချိုဦးအကြောင်းစဉ်းစားမိတိုင်းရင်မှာနာ
December 29, 2012 at 4:34pm · Like · 2
Mar Kyi Khin I saw pains in his eyes and her...I read the word behinds...my heart goes out for them....
December 29, 2012 at 5:41pm · Like
Than Doke I am very sad to see them.
December 29, 2012 at 6:27pm · Like · 1
Soe Myint Moဒီပုံကိုကြည့်ပြီး.ရင်ထဲမှာအမည်တပ်မရတဲ့ခံစားချက်တခုဖြစ်နေတယ်အမရယ်....
December 29, 2012 at 8:00pm · Like
December 29, 2012 at 8:52pm · Like · 1
Aung Win လူကျင့်ဝတ်ကိုမလစ်အောင်သိတတ်တဲလူးတာဝန်ကျေပါတယ် တ၀က်တော့ ဒါပေမဲ့ လူသားမဆန်စွာ လူသားမျိုးနွယ်အပေါ် ကျူးလွန်ခဲ့ကြ တဲ့သူတွေ ၀န်ချတောင်းပန်ဝန်မခံ သင်တော်ရာပြစ်ဒဏ်မခံရမချင်း ကျဆုံးသွားခဲ့ကြတဲ့ ရဲဘော်တွေရဲ ဂုဏ်သိက္ခာအတွက် တာဝန်ကျေလိမ့်မည်မဟုတ်ပေ
December 30, 2012 at 2:51am · Like · 2
Kotoe NB ကျနော်တို့အားလုံးမလုပ်နိုင်ခဲ့သေးတာ
December 30, 2012 at 5:18am · Like
Kotoe NB အဖမ်းမခံကြရခင်အချိန်တွေကမောင်နှစ်
December 30, 2012 at 5:25am · Like · 2
Nang Kyaw စိတ်မကောင်းပါဘူး...
December 30, 2012 at 5:39am · Like · 1
Pauline Kyi The same to u par ,.Nay YeeYee.but passed was at our back, can't turn to our face ,present and future we own, we try to find the best n success way and solve accurately together.l hope that you may be agree with me my dear.I m also feel so hurt about her.
January 1 at 12:04am · Edited · Like · 1
Zaw Win Htut so sorry about that!
December 31, 2012 at 10:11pm · Like
Aungmyint Ko ၀မ်းနည်းတယ်။
January2at 7:14am · Like
January 8 at 9:48am · Like
Kyaw Swar Tun so sorry about that!
January 8 at 12:27pm · Like
Posted by ဘရာဇီးငှက်ရိုး at 10:31 PM